I-Eurona sele ingaphantsi kwe-euro enye | Ezezimali
I-Eurona Wireless Telecom (i-EWT), yinkampani yezonxibelelwano yaseSpain ebonelela ngeenkonzo zokufikelela kwi-broadband, kwaye izisa isantya esiphezulu kwi-Intanethi apho abanye bangafikeleli khona, besebenzisa Itekhnoloji engenazingcingo kunye nesathelayithi. Izizwe ngezizwe, ezidweliswe kwi- Enye indlela yokuThengisa (MAB) ukusukela ngo-2010, yenye yezona zinto zidanisayo kubatyali mali kuba kwiminyaka embalwa isukile kurhwebo ngee-euro ezingama-4 isabelo saya kwi-0,80 ngalo mzuzu. Ngenxa yeli nyathelo kwiimarike zamasheya, alithandabuzeki elokuba abanini zabelo balahlekelwe yimali eninzi ngeli xesha.
Inyaniso yokuba izabelo ze-Eurona sele zingaphantsi kweyunithi enye ye-euro ziyanda uxinzelelo lokuthengisa malunga nezenzo zabo. Linani elungileyo leenkampani ezincinci neziphakathi ezivala izikhundla kweli xabiso kule minyaka mithathu idlulileyo. Nokuba ukhubazeke ngamandla kwizikhundla zabo njengoko boyika ukuba izinto zinokuba mbi ukusukela ngoku. Ukuya kwinqanaba lokuba lelinye lamaxabiso ezabelo awile kakhulu kula maxesha akutshanje. Ngokuwa kwexabiso kufutshane nama-90%, into engaqhelekanga kakhulu phakathi kwamaxabiso esizwe.
Kwelinye icala, xa izabelo ze-Eurona zazithengisa ngaphezulu kwe-2 euro, yayinokwenzeka kakhulu ukuba ikwazi ukufikelela kumanqanaba asondele kakhulu kwiindawo eziphakamileyo zexesha lonke. Kwithoni kwii-euro ezine kwaye uninzi lwabahlalutyi bemarike yemasheya yayiyeyona lixabiso labo. Ngoku kubonwe ukuba le ndlela ibingeyonyani kwaye kwenzekile ukuba kancinci kancinci izabelo zabo ziphulukene nexabiso kwiimarike zezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba sele kukho abathengisi abaninzi abangathembi eli xabiso lincinci liphawulwe kwaye sele kukude ekuhlaleni.
1 I-Eurona: isiqinisekiso samatyala
2 Banethemba lokufezekisa iinjongo zabo
3 Ngaba izabelo zakho ziphantsi?
4 Umngcipheko wokujulisa ukuwa kwakho
5 Iingcebiso ngokuthengisa nge-Eurona
I-Eurona: isiqinisekiso samatyala
Esoyika abanini zabelo, iintlanganiso zabanini zabelo zabanjwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo apho isivumelwano sasibonelela amatyala aneleyo kwaye iqinisekisa ukukhula okuzinzileyo kweqela kwiminyaka emine ezayo. Kodwa le nyani ayivelisanga siphumo kwixabiso lentengiso kwiimarike. Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo, iqhubekile nokuwa ngamandla amakhulu kwaye kungabikho nakuphi na ukubuyela kuko nakuphi na ukuthathelwa ingqalelo. Into eyothusayo abahlalutyi bezemali abathi kuzo zonke iimeko bacebise ukushiya izikhundla kule nkampani intsha yetekhnoloji.
Ewe, le ntlanganiso ingaqhelekanga, edibanise abanini zabelo kunye ne-53,79% yesitokhwe esikhulu esinamalungelo okuvota, ivumile zonke izinto ezikwi-ajenda.Ngoko, isiqinisekisile isiVumelwano sokuBamba okanye isiVumelwano sokuVala, kutheni ityala elichaphazelekayo ngokulungiswa Iya kuxhomekeka kwinqununu yeminyaka emihlanu kunye nokulinda inzala ukusuka kumhla wayo wokuvuthwa. Ngoku kuya kuba yimfuneko ukuqinisekisa ukuba umqhubi wonxibelelwano uzifezekisile iinjongo zakhe kwixesha elifutshane okanye eliphakathi kwaye ukubuyiselwa okuthile kungaqala ngamaxabiso ngokubhekisele kulo mzuzu.
Banethemba lokufezekisa iinjongo zabo
Ngokubhekisele kule ntlanganiso yabanini zabelo ye-Eurona, kuvela ukuba i-CEO ye-Eurona, uFernando Ojeda, uzame Zolise iimarike zezemali. Ngokubonisa ukuba "ezi nkqubela phambili ziya kuba ngundoqo ekuqhubekeni kwe-EBITDA, esiqinisekileyo ukuba iya kufikelela kwizigidi ezingama-20,2 zeerandi ngo-2022 njengesiphumo sokuphucuka komda opheleleyo, ukwenziwa ngcono kweendleko zethu eziphezulu kunye nokuphunyezwa kophuculo" . Okwangoku, iimarike khange zihoye kakhulu kuye kwaye izabelo zakhe ziyaqhubeka ukuwa ngamandla kwaye kungekho zinketho zokubuyisa, ubuncinci kwixesha elifutshane.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, unxibelelwano ngezonxibelelwano lweSpanish lwamazwe ngamazwe lusungule iqonga lokuphuhliswa kwezicelo zeselfowuni, eziya kuthi zivumele Icandelo lokhenketho nelevenkile Ukuqokelela idatha kwizinto ezithile zabathengi bayo kunye nokuphucula amava okuthenga kunye nenkqubo yeengcebiso ngokuthe ngqo ezisekwe kwiprofayili yezentlalo kunye nokukhethwa kwabo kukuthenga. Kukuyo nayiphi na imeko, isicwangciso esitsha sentengiso sokuzama ukuba inkampani ingatshintsha, ubuncinci ukusuka kwindawo yokujonga imarike yesitokhwe. Into eseleyo ukuba ibonwe, ngokutsho kwabanye abahlalutyi abafanelekileyo beemarike zezemali.
Ngaba izabelo zakho ziphantsi?
Ngokunikwa amaxabiso asezantsi ezabelo ze-Eurona, kuyinto eqhelekileyo ukuba abatyali mali bazibuze ukuba amaxabiso abo atshiphile na. Ngowona mnqweno wokuthatha ithuba ngala maxabiso kwaye wenze imali yakho ibe nenzuzo ngexesha elingelolide kakhulu. Nangona kufanele kuqatshelwe ukuba iprofayili yabatyali mali bale nkampani idwelisiweyo ibicingelwa ngokucacileyo. Ngomnqweno wokwenza izikhundla zabo zinenzuzo kwiiseshoni ezimbalwa kakhulu zokurhweba. Kodwa ngelishwa labo, bafumene iziphumo ezichaseneyo. Ayikho enye ngaphandle kwezenzo zakho abakayeki ukuhla ukusukela ngo-2014. Ngamanye amagama, iminyaka emine ayisiyondawo intle kwimidla yakho kwicandelo lotyalo-mali.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba kude kube ukubuyisa inqanaba lee-euro ezimbini Isabelo ngasinye asizukunika mqondiso ucacileyo wokuba okona kubi kuphelile. Eli linqanaba lamaxabiso asuka kuwo ngoku kukude kakhulu, kuba bekungayi kubakho nto iphantsi kwe-euro enye ngexabiso layo. Into engathandekiyo ukuba yenzeke kunyaka olandelayo. Ngaphandle kwamazwi anethemba abaphathi bawo. Ngayiphi na imeko, kuyinyani ukuba iinkampani ezincinci neziphakathi ezisesezikhundleni ngexabiso kufuneka ziqhele.
Umngcipheko wokujulisa ukuwa kwakho
Ngokuchasene noko, imeko ayisiyongxaki ngalo mzuzu kwaye kukho umngcipheko wokwenyani wokuba isenzo sabo singaqhubeka. ukulahlekelwa lixabiso elingaphezulu Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ewe kunjalo, imeko ekhoyo kwaye abatyali mali kufuneka bayivavanye ngokuchanekileyo ukuze baphuhlise naluphi na uhlobo lwesicwangciso-mali. Isigqibo esintsonkothileyo sokuthatha ngenxa yeempawu ezizodwa eziboniswa leli xabiso likhethekileyo kwezi ntsuku zokurhweba. Ayothusi into yokuba isenokuba mandundu kwiinyanga ezizayo, njengoko inani labahlalutyi bezemali libheja.
Ukuba bekunje, akukho mathandabuzo okuba kungangumsebenzi oyintlekele kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngomngcipheko wokuphulukana nenxalenye ebaluleke kakhulu kwiimali ezinkulu ezityaliweyo. Esi sesinye sezizathu zokuba kufuneka ube silumkile ngeli xabiso okhethekileyo. Isebenza kuphela kwimisebenzi yokuthelekelela kwaye ngokuxhomekeka ekubeni umsebenzisi unenqanaba eliphezulu lokufunda kule klasi yamaxabiso. Akumangalisi ukuba kunokuthiwa unokulahlekelwa ngaphezulu kunokufumana. Kwaye ke ayisiyiyo into ethethwa lixabiso elinenzuzo, ngaphandle nje kweminyaka embalwa edlulileyo izabelo zayo zazithengisa kumanqanaba ee-4 zeerandi.
Iingcebiso ngokuthengisa nge-Eurona
Ukuba, ngaphandle kwayo yonke into, isigqibo sakho kukutyala imali oyigcinileyo kule nkampani yonxibelelwano yaseSpain enikezela ngeenkonzo zokufikelela kwi-broadband, awuyi kuba nenye indlela ngaphandle kokusebenzisa uthotho lweengcebiso eziya kuba luncedo kuwe. Ayisiyiyo yokwenza imisebenzi ibe yinzuzo kuphela, kodwa kukubonelela ngesiqinisekiso esikhulu kuso nasiphi na isicwangciso sotyalo mali. Kwaye phakathi kwezi zilandelayo kubonakala ukuba sikubhengeza ngezantsi:
Nikela inxenye yolondolozo lwakho encinci iqulethe iingozi Lo msebenzi unzima kwimarike yemasheya kwaye oko kunokwenza ukuba ulahlekelwe yimali eninzi kunokuba ucinga kwasekuqaleni.
Kuya kufuneka uyihlonele indawo yokungena ukuze uhlale zixhomekeke kwixabiso. Kuba kuwo onke amathuba kuyakubiza kakhulu ngamaxabiso ukufikelela kwinqanaba elenziwe kwinto ozithengileyo. Njengoko kwenzekile kubatyali mali abancinci nabaphakathi kule minyaka idlulileyo.
Sukucwangcisa intshukumo kwixesha eliphakathi nelide kuba ekugqibeleni lo msebenzi uza kuhlawula kakhulu. Isicwangciso-qhinga sakho kufuneka sijolise ekufezekiseni inzuzo enkulu njenge ngokukhawuleza okukhulu nangaphandle kokuhoya ezinye iinkqubo zotyalo-mali. Le nkqubo kungcono ishiywe kwamanye amaxabiso ezabelo zeSpanish.
Awungekhe ulibale ukuba le nkampani yezonxibelelwano yaseSpain yenye yezo zikwi Ijelo le-bearish. Kwaye oko kunzima kakhulu ukufumana naluphi na uhlobo lwezibonelelo. Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo, njengoko unokufumanisa kwindaleko yamaxabiso abo kwimarike yemasheya.
Eyona nto inomtsalane kuyo isekelwe kulindelo Oku kudala le nkampani idwelisiweyo kwaye hayi kwiziphumo zeshishini elinikezela ngazo ukuza kuthi ga ngoku. Logama nje oku kuguquka kungatshintshi, kuya kuba ngcono ukuba awuzukuthatha zithuba kuwo. Ngokuqinisekileyo ingxelo yakho yobuqu iya kukubulela kungekudala.
Thatha ingqalelo ukuba kwizabelo zamazwe akhoyo amaxabiso amaninzi ukwenza naluphi na uhlobo lotyalo-mali. Ukusuka kolu luvo, akukho ngqiqweni ukugxila kwimisebenzi ngeli xabiso lidwelisiweyo. Kuba unokukhetha naluphi na uhlobo lokhuseleko kwimarike eqhubekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Eurona sele ingaphantsi kwe-euro enye